Download Samsung Kies daaqado 7
Kies waa software waa la jaan qaada laba dhufto ee OS weyn oo arrintan la xiriira. Waxay ka dhigaysa hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa marka ay timaado Windows iyo OS Mac. Domain Windows gudahood waa la jaan qaada daaqadaha 7 iyo daaqadaha 8 / 8.1. Oo dhan qoraalkii dambe ee Windows sidoo kale la jaanqaadaan Kies 3 taas oo mid ka mid ah kuwa barnaamijyada in la jaanqaadaan oo dhan dhufto ee arrintan la xiriira ka dhigaa. Marka ay timaado in Windows 7 waxaa jira dhowr waxyaalood oo Kies 3 qaban karto ee Samsung telefoonada gacanta oo hoos ku qoran yihiin qaar ka mid ah, kuwaas oo si faahfaahsan u weyn,
Update 1. Device
Firmware ayaa si toos ah la cusbooneysiin doonaa haddii qalabka ku xiran Kies lagu rakibay badisay 7. hagaajinta firmware cusub waxaa la ogeysiin doonaa user ka bixi kartaa oo loo casriyeeyo qalab la qasabno yar. Geedi socodka waa run ahaantii fudud oo ay jirto dhibaatana ma ku lug lahaa dhammaan. Update software ayaa loo baahan yahay in arrintan la xiriira sida ay u hubiso in dadka isticmaala ee ma aha oo kaliya aad u hesho qalabka ay ilaa sumaddii ka dhigi doonaa, laakiin sidoo kale ka fiican oo ka mid ah ka dhisay awoodda barnaamijka.
Kala iibsiga 2. Data
Kies ayaa sidoo kale lagu yaqaanaa wareejinta photos videos iyo daqiiqado kale xusuus in PC si ay xogta la badbaadin karo iyo xaqiijistay. Marxaladani waxay sidoo kale si caddaalad ah oo fudud oo ah sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in user waa in la hubiyo in dhoofinta sida button xaq u leedahay in PC waxaa riixi sameeyo sidaas daraaddeed wiilna waa arin arrintan la xiriira iyo geeddi-socodka dhaqdhaqaaqa ee joogto ah hab.
Maamulka 3. Music
Waxaa jira adeeg maamulka music gundhig gudahood Kies iyo sabab la mid ah waa ay fududahay in la maareeyo ka kooban music oo dhan in la soo badbaadiyey gal qalabka. Iyada oo kaliya hal guji music aan la wareejiyo oo keliya laakiin Kies ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sida ciyaaryahan music ah si loo hubiyo in songs waxaa lagu baadhay iyo diyaarin fudayd iyo qanacsanaanta isticmaalaha.
4. Abuuridda kaabta
Dhammaan content muhiimka ah ee qalabka waa taageeray iyadoo la kaashanayo software this. Barnaamijku wuxuu laftiisa marnaba samayn wax ka mid ah shaqada si loo badbaadiyo macluumaadka ku jira nooc kasta oo ka mid ah madal daruur laakiin waxa ay u dhaqmo sida interface ah si loo hubiyo in qalabka la xidhiidhaa wax kombiyuutarka. Haddii shilka kasta oo ay tahay mid aad u fudud in ay helaan xogta qalabka sida oo uu badbaadeen on meelo badan.
Waxaa jira tobanaan kun oo websites in loo isticmaali karaa si loo hubiyo in software la soo bixi, rakibay oo xitaa la casriyeeyay kiis kasta oo version cusub waxaa la casriyeeyay. Dajinta ayaa waxaa had iyo jeer lagu taliyey in la sameeyo website-ka rasmiga ah ee Samsung iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in URL http://www.samsung.com/us/kies/ waa in la isticmaalo download dhab ah iyo in ay aad u hesho nooca ugu dambeeya.
Kies 3 taageeray daydo
Kies 3 waa version ah la casriyeeyay ee barnaamijka software iyo sabab la mid ah ay taageerto kaliya kuwa dhammaan qalabka oo la socda android 4.3 iyo ka dib versions. Waxaa jira dhowr casriyaynta in lagu soo bandhigay barnaamijka iyo waxa la xaqiijiyey in qalabka ee Samsung in taageeraya bean Jelly qoraalkii android la sameeyey la socon barnaamijkan. Waxaa jira liis dheer oo ay hindiseen in la jaanqaadaan Kies 3 iyo qaar ka mid ah ayaa lagu qoran sida soo socota oo keliya ee dadka isticmaala si ay u fahmaan,
• Samsung Galaxy S4 firfircoon
• Ogow Samsung Galaxy 2
Kies 2.6 daydo taageeray
Kies 2.6 waa version ah xad da'da ah iyo in la hubiyo in ugu wanaagsan waxaa laga soo software waxaa jira xeer fudud in la xasuusto sida qalabka Samsung oo la bilaabay ilaa September 2012 waxaa taageeraya Kies 2.6. Si loo hubiyo in ugu fiican waxaa soo xushay marka la eego gmail, qaar ka mid ah telefoonada gacanta waxaa sidoo kale ku xusan liiska hoose oo keliya in ay iftiiminaya user ee arrintan la xiriira si aad u hubiso in ay marnaba u hesho dhibaato deeruhu ee gmail qaldan oo lahaa marnaba waxaa lagu ogaan by software:
• Samsung XIDHIIDH tuubada deg deg ah
• Samsung koraya Android casriga ah
• Samsung buuxsama
Dhibaatada ku rakibidda Kies on 64bit Win7 iyo xalka
Waxaa jira dhowr arrimood oo la xidhiidha rakibo ee Kies ku daaqadaha 7. Arrinta ugu badan ee arrintan la xiriira waa xaqiiqda ah in user ma awooddo si loo soo dajiyo Kies ay sabab u tahay screen buluug dhimashada oo u muuqata markii la rakibey yahay ku dhawaad ​​dhameystirtay laakiin ma buuxa. Marka ay timaado in xal ay tahay si caddaalad ah oo fudud oo lagu tilmaamay hoos ku qoran:
• Java waa in laga soo degsan oo lagu rakibay ka website-ka rasmiga ah.
• The software Kies mar kale waa in la soo bixi oo ku rakiban.
• Marka la sameeyo update ee Kies leeyahay in la ordi mar kale si loo hubiyo in aan dhibaatada la xalin.
• Waxaa loo xaliyo arrinta ku Win 7 64 jajabkii weligiis iyo cayayaanka si toos ah waxaa laga saari doonaa.
Haddii Java ayaa lagu sii diyaariyey ka dibna lagu rakibay waxaa lagula talinayaa in ay uninstall oo dib-u-soo dajiyo si ay u helaan arrinta la xalin buuxda.
Waa mid ka mid ah fursad kale oo fiican ee Kies marka ay timaado Samsung Mobile maamulka content. Iyada oo aan wax cayayaanka iyo arrimaha la xiriira Mobilego Wondershare waa shey in hubiyaa in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira. Wondershare Lafteeda waxa adag ku dadaalaya in ay hubiyaan in sheyga waxaa lagu casriyeeyaa ah qaababka ugu wanaagsan ee suurto gal ah.
> Resource > Samsung > Samsung Kies Download for Windows 7